WARBIXIN: 6 Waxyaabood Oo Aynu Ku Aragnay Tababarkii Ugu Dambeeyay Ee Kooxda Liverpool – Kooxda.com
Home 2017 October Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: 6 Waxyaabood Oo Aynu Ku Aragnay Tababarkii Ugu Dambeeyay Ee Kooxda Liverpool
WARBIXIN: 6 Waxyaabood Oo Aynu Ku Aragnay Tababarkii Ugu Dambeeyay Ee Kooxda Liverpool
Fasaxa xulalka ayaa soo dhamaaday badanka xiddigaha kooxda Liverpool-na waxa ay ku soo laabteen tababarka buuxa ee ay kooxdoodu isugu diyaarinayso kulanka Sabtida.
Xiddigaha Tababare ayaa kulan adag la ciyaari doona kooxda aan ilaa haatan laga badin ee Man United iyaga oo ku soo dhawayn doona garoonkooda Anfield.
Reds ayaa ku dhibaatootay premierleague kulamadii ugu dambeeyay iyada oo hal kulan badisay 4-tii kulan ee ugu dambeeyay.
Si kasta ha ahaatee Liverpool ayaa isha ku haysa in ay xaaladan xun kaga baxdo guul ay ka gaarto kooxda ay sida weyn u xafiiltamaan ee Man United.
Hadaba waxa aanu warbixintan kuugu soo bandhigaynaa 6 waxyaabood oo lagu arkay tababarkii ugu dambeeyay ee Reds.
Tababare Jurgen Klopp Oo aan faraxsanayn:
Klopp ayaa maanta tababarka soo galay isaga oo aanay ka muuqdan dhoola cadayntii looga bartay ee uu ku caan baxay.
Guul ay Kooxdiisu United ka gaarto ayaa ku soo celin doonta wadada saxda ah.
Firmino Oo soo laabtay:
Qaab ciyaareedka liita ee uu Firmino soo dhigay kulamadii ugu dambeeyay ayaa sabab u noqday in kursiga kaydka la dhigo kulankii Newcastle laakiin waxa uu u muuqday mid aad u dadaalay waxana la filayaa in uu dib u helo booskiisa kulanka duhurnimada ee United.
Matip oo Hogaamiye ah:
Daafaca Liverpool ayaa ku jira xaaladii ugu xumayd ee muddo dheer taas oo ay Lukaku iyo saaxiibadii ka faa,iidaysan doonaan markay la kulmaan, Matip ayay Liverpool si aad ah ugu tiirsanaan doontaa kulanka United iyada oo kubad dilista sawirka ka muuqata aad loogu baahan doono kulan Afield.
Ings Oo Qoslaya:
25 jirkan ayay noloshiisa Liverpool hadheeyeen dhaawacyo xilli maanta lala xiriirinayay kooxda ku ciyaarta St. James’ Park, Ings ayaa qoslayay tababrkii maanta xilli uu sugi doono wakhtigiisa si uu u badbaadiyo Klopp.
Sawirka Daniel Sturridge ee cajiibka ah:
Ma waxa jiri kara sawir kale oo matali kara xaalada haatan ee Liverpool uu kaga jir?, 28 jirkan ayaa ku fashilmay in uu wax saamayn ah ku yeesho kulankii Newcastle waxana la filayaa in uu ku laabto kursiga kaydka kulanka United.
Qaab ciyaareedkii Moreno oo wali sii socda:
Albarto Moreno ayaan ku jirin xaalada Sturridge oo kale maadama uu wakhti xaadirkan qaab ciyaareed cajiibka ku qaadanayo kooxdiisa Moreno oo ay u muuqatay in uu mustaqbalkiisa Afield dhamaaday ayaa ku soo bilowday 9 kulan oo ay Liverpool ciyaartay xilli ciyaareedkan.